संसद विघटनप्रति विप्लव सकारात्मक — KhabarTweet
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०१, २०७७ समय: १३:१२:३१
अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा के गर्दै छ ? पछिल्लो एक महिनायता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि विप्लवको रणनीति, दृष्टिकोण र क्रियाशीलता कसरी अगाडि बढेको छ ? यस्ता आमजिज्ञासा देखिन थालेका छन् ।
उनले पुस ५ गतेको संसद् विघटनसँग विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ गाँसिएको बताउँदै मुख्यतः दुई कारण औँल्याएका छन् । ‘पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचको अपवित्र एकता । दोस्रो, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेप । एउटा दलाल पुँजीवादी सत्ताको असफलता, अर्को सरकारी पार्टी र गुटहरूको असफलता । एउटा दलाल पुँजीपति वर्गभित्रको स्वार्थ संघर्ष, अर्को सरकारी पार्टीभित्रका गुटहरूको संघर्ष ।’
उनले जनआस्थाको सोधाइमा जवाफ फर्काएका छन्, ‘यो कुनै आकस्मिक घटना होइन बरु तीन दशकको असफलतासहित आइरहेको संसदीय व्यवस्थाकै नयाँ संकट मात्र हो । यो केपी ओलीको सरकार भएका कारणले मात्र होइन, अरुको सरकार भए पनि ढिलो चाँडो हुन्थ्यो ।’
हामीमाथि जसरी प्रतिबन्ध लगाइयो, यो नै अन्यायपूर्ण एवं अनुचित छ । देशलाई कर छली गर्ने र देशको धन उडाउन खोज्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग पूरा गर्नु हाम्रो के अपराध थियो ? जनताको करबाट जम्मा भएको कोषलाई स्वाहा पार्ने भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नु के गल्ती भयो ? न्यायको आवाज उठाइरहेका हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई गोलीले हान्न र जेलनेलमा हाल्न किन प¥यो ? हामीलाई शान्तिपूर्ण रूपले जनतामा जानबाट किन रोक्ने ?
राजेन्द्र स्कुल पढाउने शिक्षक अवश्य हो तर उनलाई राज्यले शिक्षकको गरिमामय पेशाविपरित सुराकीको रूपमा प्रयोग गरेर जघन्य अपराध गरेको छ । यसका प्रमाण पर्याप्त छन् । उनलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि दमन गराउने कार्य रोकेनन् । सुराकीका कारण कमरेडहरू गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । सीसीएम कमरेड बालबाल बच्नुभयो । केन्द्रीय नेताहरूलाई घेरा हालियो । पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । जनतालाई नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई सहयोग गरेमा तातो गोली खुवाउनुपर्छ भन्दै आतंकित पार्ने काम भयो । फेरि पनि सम्झाउन जाँदा यस्तो घटना घट्यो । शिक्षक साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ राज्यको यस्तो दमनकारी कार्यको मतियार नबनौं । हामीले सच्याउनुपर्ने विषय सच्याउँछौं ।
देशको स्वाधीनता, जनताका अधिकार, दैनिक जीवनका समस्यालाई हेर्ने, बुझ्ने र समाधानबारे दृष्टिकोण मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको सुदृढ र दीर्घ सहकार्य नै रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हो । नेपालमा लामो समयदेखि कम्युनिष्टले राज्य रूपान्तरण र संयुक्त मोर्चाका लागि प्रयत्न गर्दै आएका हुन् तर हालसम्म सफल हुन सकेको थिएन । कि पार्टी एकतामा जाने कि कार्यगत एकतासम्म पुगेर फर्किने हुँदै आएको थियो । तर, यो समयमा हामी चार पार्टी रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएर देशलाई संसदीय व्यवस्थाको घेराभित्रबाट निकाली जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजान सयुक्त मोर्चा बनाउन सफल भएका छौं । यसर्थ यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको उत्पीडन र देशलाई साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एवं अतिक्रमणबाट मुक्त गरेर जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रहेको छ । जनआस्थावाट